YEYINTNGE(CANADA): Monday, April 08
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/08/20130အကြံပြုခြင်း
ဓါတ်ပုံ - ကိုဇော်
Moe Aye ဟော်လန်သူငယ်ချင်းကို ပုံကိုပြပြီး မင်းဘာထင်လဲလို့မေးကြည့်ဖြစ်တာပါ..သူကတော့ တရားခံကို ရဲတွေ က ကားထဲပို့တဲ့အမြင်မရပဲ လူကြီးသား ဒါမှမဟုတ် နာမည်ကြီးအနုပညာသည်ကို လုံခြုံရေးအပြည့်နဲ့ သူ့ကားထဲလိုက်ပို့တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရနေတယ်..အရှေ့နဲ့ အနောက် အမြင်ကွာတာလေးပြောမိတာပါ။ ပုံရဲ့ ဇာတ်လမ်းအမှန် သူ့ကို ပြောပြတော့ သူက ပိုတောင် အံ့အားသင့်တဲ့ပုံပဲ။ အဲဒီလောက် ရဲတွေများရတဲ့ တရားခံဆိုရင် ဟော်လန်မှာ ကျည်ကာဝတ်ပေးရတယ်တဲ့။
ကိုရဲမင်းဦး အမြန်ဆုံး ပြန်လည်လွတ်မြောက်ပါစေ။
နေပါဦးဗျာ စလုံးသတင်းစာတို့ ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းစာတို့ စတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ သတင်းစာတွေထဲက ဘယ်သတင်းစာကများ မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သေရေးရှင်ရေးကိစ္စတွေကို အကောင်းဖက်ရောက်အောင် ရေးဖူးတုန်း။
ဂျပန်က အဆာဟိရှင်ဘွန်းရဲ့ သတင်းဖော်ပြချက်တွေရယ်၊ တရုတ်က မြန်မာအပေါ်ထားတဲ့ ဒစ်ပလိုမေစီဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာသုံးသပ်ချက်တွေကို ရှင်ဟွာမှာတွေ့ရတတ်တာတွေရယ်နဲ့ပဲ ယှဉ်ကြည့်ပါဦးဗျာ။
နီယိုနာဇီလို့သုံးလို့လဲ နာမနေကြနဲ့ဗျ...အဲ့လို စသုံးတာ ကိုယ့်ပြည်တွင်းက ဆရာကြီးတွေပဲဆိုတာလဲ မမေ့ကြနဲ့ဦး။ တိုင်းသိပြည်သိ Buddhist Extremists ဆိုပြီး ဦးကိုကိုလှိုင်က လုပ်ချလိုက်တာလဲ သတိရပေါ့။ သူများက သုံးချင်လို့သုံးတာထက် ကိုယ့်ဆီက ကောင်တွေက အရင်သုံးပြီးသား ဆိုတာလေး သတိရပေါ့ဗျာ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒီလို လူအုပ်လိုက်ရမ်းကားတာမျိုးတွေက ဒီတိုင်းပြည်မှာပဲဖြစ်တာလားဗျာ။ အဓိရုဏ်းတိုင်းရဲ့ လက္ခဏာက ဒီလိုဆင်တူချည်းပဲရှိသဗျ။ လူမျိုးရေးမဟုတ်ရင် ဘာသာရေးမဟုတ်ရင် လူတန်းစား ပဋိပက္ခတွေချည်းပဲ။ ဒါကြောင့် ဝုန်းခနဲဖြစ်တာနဲ့ လုံထိန်းတွေက ထိထိရောက်ရောက်ဖြိုခွင်းကြရတာ။ အသက်အန္တရာယ်လဲမဖြစ်အောင် ထိန်းကြရတာ။
ဒို့တိုင်းဒို့ပြည်က ပညာရှိတွေလက်ထက်ကျမှပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ပဲရှက်စရာကောင်းသလိုလို ဖြစ်ကုန်ပြီ။ အခုလို ရမ်းကားလာတာက တစ်ကယ်တမ်း Buddhist Civilization လက္ခဏာတွေယိုယွင်းလာတာဗျ။ ယဉ်ကျေးမှု သိမ်မွေ့မှုတွေ ကျဆင်းလာတာ။ ဒီလို ရမ်းကားတတ်တဲ့လက္ခဏာက လူ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပညာတတ်မှု၊ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်နိုင်မှု ကျဆင်းလာတယ်ဆိုတာပြနေတာ။ ဒါကြောင့်် ဗုဒ္ဓဘာသာ သိက္ခာကျရတယ်လို့လဲ မမြင်သလို ဒီလိုပြောချင်တဲ့ လူတွေကလဲ အချက်အလက်ကိုခွဲပြီး မြင်တတ်တဲ့ analytical skill အားနည်းတယ်လို့ ဆိုရပေမယ်။
အဓိကရုဏ်းကို အဓိကရုဏ်းလို ပုံမဖော်ဘဲ နာဇီ ဘာညာနဲ့ ကိုယ့်ဆီက လူတွေက လုပ်တော့ နှိပ်ချင်တဲ့ ဟိုကောင်တွေက အထူးပင်ပန်းခံစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အောက်မယ် ကမ္ဘာ့ အသေအပျောက်အများဆုံးအဓိကရုဏ်းတွေကို စာရင်းဖော်ပြထားတယ်။ မြန်မာပြည်က မိတ္တီလာ ကေ့စ်နဲ့ ဘာများကွာတုန်းဗျာ။ အသေအပျောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ နောက်ကွယ်က လက်သည်ကို မြင်နေရပါလျက်နဲ့ ကိုယ့်လူတွေကို ထောင်ချောက်ထဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အတင်းတွန်းပို့သလို ဖြစ်နေတာကိုတော့ စိတ်ပျက်သဗျာ။
၁ နှစ်ကျော်ရှိသော ကလေးငယ်(၂)ဦးအား လပ်ထပ်ပေးရန် စီစဉ်ခဲ့
arakantimes.net ရေးသားသူ- မိုးဇော်
ရခိုင်ပြည် ပေါက်တောမြို့နယ် ကြိမ်ခွေမော်ကျေးရွာတွင် အသက်(၁)ကျော်နှစ်သာရှိသေးသည့် ကလေးငယ်(၂)ဦးကို မိဘများက ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့တွင် လက်ထပ်ပေးရန်စီစဉ်ကြရာ ရဲများမှ အခြေအနေအား လာရောက် မေးမြန်ခဲ့သဖြင့် မိဘများက ၎င်း တို့အား အပြစ်ပေးမည်ကို စိုးရိမ်ကာ မင်္ဂလာပွဲအား ပျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မောင်ဖြူသန်းလင်းနှင့် မပုပုသန်းတို့ နှစ်ဖက်မိဘများသဘောတူ လက်ထပ်ရန်စီစဉ်ထားသည့် ထိမ်းမြှားမင်္ဂလာ ဖိတ်ကြားလွှာ
ဧပြီလ (၇) ရက်နေ့က ပေါက်တောမြို့ ရဲများမှာ အခြေအနေအား စုံစမ်းမေးမြန်ပြီး မင်္ဂလာပွဲအား ဖျက်သိမ်းရန် မလိုကြောင်း မှာကြားခဲ့သော်လည်း မိဘများက သူတို့ အလိုအလျှောက် ဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
" ရဲဌာနက တာဝန်ရှိသူများနှင့် လူကြီးများက စစ်ဆေးမှုများလုပ်ခဲ့သည်မှာ မှန်ကန်သော်လည်း သူတို့ မင်္ဂလာပွဲကို နှောင့်ယှက်တာမျိုးလုပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ တာဝန်အရသာ စစ်ဆေးမှုနှင့် သတင်းမေးရန် အလည်လာတာဖြစ်ကြောင်း၊ ၄င်းတို့ မိဘများကိုလည်း ဒီမင်္ဂလာပွဲကို ဖျက်ဖို့အတွက် လာခဲ့တာမဟုတ်ကြောင်း၊ တာဝန်အရ စစ်ဆေးခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီမင်္ဂလာပွဲကို ဖျက်ဖို့မလိုဘူးလို့ ပြောကြားခဲ့ကြောင်း။ " ဟု ရဲများနှင့်အတူ လိုက်ပါသွားသည့် အရပ်သားထဲမှ တစ်ဦးက ပြောသည်။
အသက် ၁ နှစ်ကျော် ခလေး(၂) ဦးအား မင်္ဂလာဆောင်ပေးရန် လုပ်ဆောင်ခြင်း အကြေင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကလေး၏ မိသားစုဝင် ဒေါ်မစိန်အေးက ရှင်းပြသည်။
" အဲဒီကလေးနှစ်ဦးက လူဝင်စားတွေဖြစ်တယ်၊ အရင်ဘ၀တုန်းက ချစ်သူတွေဖြစ်တယ်၊ နှစ်ဦး နှစ်ဘက် မိဘတွေ သဘော မတူတဲ့အတွက် လက်မထပ်ဖြစ်ဘဲ ကွဲသွားပြီး သေဆုံးသွားကြတယ်။ ကလေးတွေမွေးပြီးတော့ ၅ လလောက်ကြာတော့ အဲဒီကလေးနှစ်ယောက်က နေမကောင်း ခဏခဏ ဖြစ်လာတယ်။ မိဘတွေကလည်း စိုးရိမ်ပြီး ဗေဒင်သွားမေးတော့ ဗေဒင်ဆရာက သူတို့ဟာ အရင်ဘ၀တုန်းက ချစ်သူတွေဖြစ်တယ်။ အခု ယတြခြေတဲ့အနေနဲ့ သူတို့ နှစ်ဦးကို လက်ထပ်ပေးလိုက်ပါဆိုလို့ လက်ထပ်ပေးဖို့ စီစဉ်တာဖြစ်တယ်၊ မနေ့က ပေါက်တောမြို့ ရဲမှူးတွေ၊ လူကြီးတွေက မေးမြန်းတာတွေပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့ မိဘတွေက ဖမ်းဆီးတာတွေ လုပ်မလား၊ အပြစ်တွေ အများကြီးဖြစ်သွားမလား တွေးပြီးတော့ ကြောင်းကြစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တာပါ။ ရဲတွေက ဖျက်လိုက်လို့ မပြောသွားပါဘူး။ ကျမတို့ကပဲ စိုးရိမ်စိတ်လွန်ပြီးတော့ ဖျက်လိုက်တာပါ။ " ဒေါ်မစိန်အေးက ဟု ပြောသည်။
ကလေးငယ်(၂)ဦး၏ အမည်မှာ မောင်ဖြူသန်းလင်း(ဘ- ဦးမောင်ညွန်တင်၊ မိ- ဒေါ်သန်းသန်းယဉ်) နှင့် မပုပုသန်း (ဘ- ဦးသန်းမောင်၊ မိ- ဒေါ်ခင်ခင်သန်း) တို့ဖြစ်ပြီး သူတို့နှစ်ဦးကို ခရစ်နှစ် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၉၇၃ ခုနှစ် နယုန်လဆန်း ၂ ရက်နေ့တွင် တစ်ရက်တည်းမှာပင် နာရီပိုင်းလောက်အကွာတွင် မွေးဖွားခဲ့ကြောင်း ၄င်းမိဘများက ပြောသည်။
အဆိုပါ ကလေးငယ်(၂)ဦး၏ မိခင်များမှာ ညီအစ်မများဖြစ်ကြပြီး ၄င်းကလေးများကြီးလာရင် မောင်နှမဖြစ်တဲ့အတွက် လက်ထပ်ပေးလို့မရသောကြောင့် ဗေဒင်ဆရာပြောသည့်အတိုင်း ကလေးတွေကျန်းမာရေးအရ ယတြာခြေသောအနေဖြင့် အသက်ငယ်ရွယ်တုန်းအချိန်ခါ လက်ထပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
by Bo K Nyein on Saturday,6April 2013
အချို့နဲ့ဆိုရှယ် လစ်ဖရယ်ဝါဒကိုမျက်စိမှိတ်အကောင်းထင်နေတဲ့ အဖြူအထင်ကြီးသူဒေါ်လာစား တချို့က၊ရဟန်းတချို့ ကိုပင်အကြမ်း ဖက်သယောင်ယောင်၊မြန်မာလူမျိုးကိုပင်အကြမ်းဖက်သမားများယောင်ယောင်၊ ဆိုရှယ် မီဒီယာများတွင်ရေးသားလာသည်ကိုတွေ့မြင်နေရပေသည်။လူမျိူးမုန်းအစွန်းရောက်ကုလားဝါဒီသမား တစ် ယောက်က ဆိုလျှင် မြန်မာတွေကို နာဇီနှင့် လာနှိုင်းနေပေးသေးသည်။ရိုင်းလိုက်သည့်သစ္စာဖေါက် တွေပင်။
ထိုကြောင့်….ကိုးကွယ်သောဘာသာ နှင့် ဘာသာကာကွယ်တာခြင်း..မတူတာကို သိသာအောင်… တင်ပြ လိုက်ရပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်….စာရေးသူ၏..နားလည်မှုတွင် …..ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အနှစ်သာရမှာ ..သစ္စာ (၄)ပါး တည်းဟူသော သစ္စာတရား ပင်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင်..ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုသည်မှာ… universaltruth အပြင်..convincingtruth လည်းဟုတ်ပေသည်။
Universal truth ဆိုသည်မှာ သဘ၀..အမှန်တရားပင် ဖြစ်သည်…
ဥပမာ..(နေ) ကဲ့သို့သော (ကြယ်) တို့သည် အရင်ကြယ်များပျက်စီးရာမှာတစစီကျန်ရစ်သော..အခိုးအငွေ့ .. များနှင့်..အကြွင်းအကျန် ဒြပ်သတ္တုတို့မှ…gravity ဆွဲဆောင်မှုမှ ပေါင်းစပ်လာကြပြီး…လိုအပ်သော ပမာ ဏ သို့ရောက်ခဲ့ပါလျှင် Fusion ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်၍…(ကြယ်) တည်းဟုသော ..အရာဖြစ်ပေါ်လာရပေသည်။
အကယ်၍..ပေါင်းစပ်ရာတွင် Fusion ဖြစ်လာက်အောင် ဒြပ်ထု (matter) မရှိခဲ့သော် (နေ) ကဲ့သို့သော (ကြယ်) ဘ၀မရောက်ပဲ Brown Dwarf ဟုခေါ်သော အရာ အဖြစ်သာ တည်ရှိနိုင်ပေသည်။(ကြယ်) ဖြစ်စဉ် တွင် မပါခဲ့သောအခိုးအငွေ့ နှင့် ဒြပ်ထုတို့သည် တဖန်…အသီးသီး …စုဝေးလာပြီး..ဂြိုလ်များ..ပေါ်ပေါက်လာ ကြပေသည်။ ထို့ကြောင့် သိပ္ပံပညာ မတိုးတက်စဉ်က ..Fusion ကြောင့် အလင်းရောင် ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိသော (ကြယ်) များကိုသာမြင်နိုင်ကြပြီး…ယ္ခုမှ အလင်းရောင်..မထုတ်နိုင်သော ဂြိုလ် (Planets) များတည်ရှိမှုကို တွက်ချက်မှုမှ သိရှိနိုင်လာကြပြီး..တချို့ကိုပင်..မြင်..နိုင်စွမ်းရှိလာကြရပေပြီ….
ဤသို့..သဘာဝလောကကြီးတွင်… သဘာဝတရား..အရ..ဖြစ်ပျက်လျှက်ရှိသော…သဘာဝအမှန်တရား..ကို Universal Truth ဟုခေါ်ပါသည်။ ဤသို့ သဘာဝလောကကြီးတွင့် ဖြစ်-ပျက်-ပြောင်းလဲမှုများသည်…law of Physics ဟုခေါ်သည့် သဘာဝရူပဗေဒဥပဒေ များအရ..ဖြစ်-ပျက် လျှက်ရှိသည်။ ဤသည်တို့မှာ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ဖြစ်ပျက်မှုများသာ..ဖြစ်ပေသည်….ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ….သဘာဝလောကကြီးအတွင်း..နေထိုင် ကုန်သော..သတ္တ၀ါအားလုံးတို့သည်လည်း…သဘာဝလောကကြီး၏…သဘာဝလောကတရားများအရကြင်လည်နေကြရပေသည်။ဤဖြစ်စဉ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာအရ(၃၁)ဘုံတွင် သံသရာလည်သည်ဟုဆိုသည်။
ဤသဘာဝ..တရားသည်…ဘုရားပွင့်သည်ဖြစ်စေ..မပွင့်သည်ဖြစ်စေ ၊သဘာဝတရားများအရ….ဖြစ်ပျက်မြဲ ..ဖြစ်ပျက်လျှက်ရှိသလို…. အဆုံးအစ..မရှိ..ဖြစ်ပျက်လျှက်ရှိပေသည်။ကံကောင်း၍..ဘုရားပွင့်သည့်.. အချိန်တွင်..(လူ) လာဖြစ်ရသော သူများသည်..အကျွပ်တရားရ၍ …သဘာဝဖြစ်စဉ်..ဒုက္ခမှ ကင်းငြိမ်းသွား ကြရ..ပေသည်။ ထို့နည်းတူ ဘုရားသာသနာ ထွန်းကားသည့်အချိန်များတွင်လူဖြစ်ရသောသူများသည်လည်း၊ဘုရားဟောကြားခဲ့သည့်..(တရား) ကိုလိုက်နာကျင့်ကြံသူများသည်၊သစ္စာ(၄)ပါးတည်းဟူသောတရားကိုတွေမြင်ကြရ၍..သဘာဝတရားမှ လွပ်ငြိမ်းသော နိဗ္ဗန်ကို ရောက်ကြရပေသည်။
သဘာဝတရားအရ..(အချိန်)၏တိုက်စားမှုကြောင့်သာသနာပျောက်ကွယ်သွားသည့်ကာလများတွင်..သဘာဝတရားအရ..ကြင်လည်နေရသော သံသရာမှ မလွပ်မြောက်နိုင်ကြတော့ပေ။နောက်ဘုရားပွင့်မှနောက်ဘုရားက…ဤသဘာဝတရားများကိုပင်သိမြင်လာကာ….ဤသစ္စာ (၄) ပါးတည်းဟူသော တရား ကို ဟောကြားမှ ဗုဒ္ဓဘာသာတည်းဟူသော သစ္စ (၄) ပါးတရားတော်သည် တဖန် အသက်ရှင် လာရပေ တော့သည်။
ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်သစ္စာ(၄)ပါးတည်းဟူသော တရားသည် သံသရာမှ လွပ်မြောက်ရာလွပ်မြောက်ကြောင်းတွင်အဓိကကျပေသည်။ဘုရားသခင်ဆိုသူမှတရားတော်ကိုပြသတရားပြသူဆရာသခင်သာဖြစ် ပေသည်။ဒယ်အိုးဆရာတော်ဟောကြားတော်မူသောတရားခွေတစ်ခုတွင်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသခင် ကိုကိုးကွယ်ကြသည်မှာ ဘုရား၏ကျေးဇူးတော်တရားကိုသိရှိ၍ကိုးကွယ်ခြင်းသာဖြစ်ပေသည်ဟုဟော ခဲ့သည်။ မှန်ပေသည်။ ဂေါတမြတ်စွာဘုရားကို ကိုးကွယ်ခြင်းသည် ၊ ဖန်ဆင်းရှင်ကို ကြောက်ရွံ့သဖြင့် ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် ကွာခြားလှပေသည်။
သို့သော်စာရေးသူ၏အမြင်အရဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်အရေးအကြီးဆုံးသောအပိုင်းအစ(component) တစ်ခု..မှာ လုံးဝဥသုံသက်ဝင်ယုံကြည်မှု ConvincingTruth ဖြစ်သည်။
စာရေးသူသည်တရားကြောင့်..မဟုတ်သေးမဲ့..တိရစ္ဆာန်ကလေးများကို (ချစ်) တဲ့စိတ်..ကိုယ်ချင်းစာသည့် (စိတ်) သည်..convinced ဖြစ်သည့်အဆင့်တွင် တည်ရှိလျှက်ရှိပါသည်။ထို့ကြောင့်ယခင်ကတ၀ီဝီနှင့်(ခြင်)အသံကြားလျှင်လက်..ကအလိုလို ရိုက်..လိုက်မိပြီ။ ပုရွပ်စိပ်.များကိုတွေ့လျှင်..တွေးမနေတော့.. လက်ဖြင်ဖိနှိပ် …. သတ်..လိုက်မိပြီ….စာရေးသူ၏ စိတ်တွင်..(အသိ) မရှိ၍ ..(သတိ) ..မရှိခဲ့ပါ။ ယ္ခု.. စာရေးသူတွင်..တိရိစ္ဆာန်ကလေးများကို..ချစ်..သော (အသိ) စိတ်ရှိပါပြီ..ထို့ကြောင့် (သတိ) ..ရှိပါပြီ.. ထို့ကြောင်..ယ္ခင်ကဲ့သို့ … လက်ကအရင်မရောက်တော့ပါ… အော်..သူတို့လည်း..အစာရှာ.စားနေကြပါလား ဟု ဂရုဏါသက်မိပြီး..မသတ်..တော့ပါ….
ဗုဒ္ဓဘာသာတရားအရ..သူတပါးအသက်ကို သတ်ခြင်းသည် (မကောင်းမှု) ဟု convinced ဖြစ်သွားသော သူတော်စဉ်သည်..(အသိ) စိတ်နောက်တွင် (သတိ)..စိတ်..(ကပ်) ပါလာသည့်အတွက်…သူတပါးအသက် ကို ဘယ်လိုအခြေအနေပါပဲ..ဖြစ်ဖြစ်..မသတ်..တော့ပါ…..
ရိုးရိုး(အသိ)နှင့်.. convinced (အသိ)မတူပါ….
စိတ် နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွာခြားချက်….
သိပ္ပံပညာသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှုများကိုလေ့လာတိုင်းထွာ..သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် နားလည် နိုင်ပေသည်။ သို့သော်..စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုကို ယနေ့အထိတိုင်ခွဲခြားစိတ်ဖြာတိုင်းတာသိစွမ်းနိုင်စွမ်း..မရှိသေးခြေ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အနှစ်သာရတစ်ခုဖြစ်သော (အဘိဓမ္မာ) တရားတော်သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဝေဖန်သုံးသပ်မှုပြုထားသော..အလွန်တန်ဖိုးရှိသော(တရားတော်)ဖြစ်ပေသည်။(စိတ်)၏ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုသည်အလွန်မြန်ပေရာ..၀ိပသနာ.. တရား ကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းဖြင့်သာ..(စိတ်)ကိုထိန်းချုပ်နိုင်၍..(သမာဓိ) အားကောင်းလာသောအခါမှ သာ… (တရား) ကို (သိမြင်) လာနိုင်ပေသည်။
ဤသို့..တရား..ကို..သိမြင်..သည့်..အဆင့်.. ရောက်မှာသာ… လုံးဝဥသုံ..ယုံကြည်သည့် Convincing State ရောက်မှသာ(အကုသိုလ်(ကံ)ကိုဖန်ထီးသော(အကုသိုလ်(အလုပ်)ကိုမလုပ်ဆောင်တော့ပါ….ဤသို့..
နှင့်..နောက်ဆုံး…သစ္စာ (၄) ပါးအားလုံးကို သိမြင်သွားသည့် အခါ …နောင်ဘ၀ကိုတွန်းပို့နေသော…(တဏှာ) (ပြတ်) သွားသည့် အခါ မှ…နောက်ဘ၀ဆက်ရန်..မရှိတော့သည့် အခြေအနေ (State) သို့ရောက်သွားသည့်.. အခါမှသာလျှင် …(နိဗ္ဗာန်)သို့ရောက်ရှိရပေသည်။
ရဲမှလွပ်မြောက်ရန်..နောင်ဘ၀မရှိလောက်အောင်…Convincing truth ကို(သိ)ရှိ(နားလည်)..(ယုံကြည်)သော(အဆင့်(State)သို့ရောက်ခဲ့သည်ရှိသော်…လုံးဝ(အေးချမ်းမှု)ကိုရရှိကာ…ဆက်ခါဆက်ခါ
ဘ၀မျိုးဆုံ ဖြစ်ပေါ်နေရသော (process) (ရပ်) သွားသော (State)ကိုရောက်ခြင်း..တနည်းအားဖြင့်(တဏှာ) ပြတ်နိုင်သည့် နောက်ဆုံး State ကိုရောက်သွားသောသူ ၊ သံသရာ လည်ပတ်မှု (process) (ရပ်) သွားသောသူ ကိုမှု (နိဗ္ဗာန်) ရောက်သူဟု ခေါ်ဆိုပါသည်….
ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ၏(နိဗ္ဗန်)ဆိုသည်မှာ..ဖန်ဆင်းရှင်..တန်ခ်ိုးရှင် ကို ယုံကြည်ကြသော ဘာသာများ၏ (နိဗ္ဗာန်) (Heaven) နှင့် (ကွာခြား) သည်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်။ ထိုထိုသော ဘာသာတို့တွင် စာရေးသူနားလည် သမျှ ဆိုပါလျှင် ၎င်းတို့၏ (နိဗ္ဗာန်)ဆိုသည်မှာထာဝရသာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော(Eternal Paradise) ဖြစ်ပေသည်။
ထို့ကြောင့်ထိုထိုသောဘာသာတို့သည်(ငါ့ဘုရား)..(ငါ့ဘာသာ) ဟူသော (ငါ) ကို (အခြေပြု) သော (ငါ) ဘာသာများဟုဆိုချင်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာသည်… (တဏှာ)ကြောင့်ဖြစ်သော(ငါ)ကိုဖြတ်ပိုင်းသော.ဘာသာ..ဖြစ်သည်။ (ငါ) ဖြတ်မှ.. (ငါ) ကို (စွန့်) နိုင်မှ..သစ္စာ (၄) ပါးတည်းဟူသော..(တရား) တော်ကို မြင်ရှု၍.. (ငါ)..ကင်းသော… အေးချမ်းသည့် (နိဗ္ဗန်) ကိုရရှိကာ (Process) တည်းဟူသော သံသရာဝဋ်မှ ကျွပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
(အပြင်) ချမ်းသာမှု နှင့် (အတွင်း) ချမ်းသာမှု ခြင်းကွာသည်။
အကယ်တော့…ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ..တဦးချင်း (Individual) အပေါ် မူတည်သောဘာသာဖြစ်သည်…
ထို့ကြောင့်..ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်ကိုအမှူးပြုသော..ကြင်နာမှုကိုအခြေခံသော..ကုသိုလ် တရား ကို (အားထား) သော ဘာသာတရားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတွင်..တုတ်-တုတ် ချင်း..လှံ-လှံ ချင်းဟူသော an eye for an eye…atooth foratooth အတွေးအခေါ်ကိုဦးစားမပေး..
ထို့ကြောင့်..ဗုဒ္ဓဘာသာသည် (အကြမ်းဖက်မှု) ကို အရေးပေးသောဘာသာ..မဟုတ်ဆိုသည်မှာ..အမှန်ပင်
စာရေးသူတို့..အများစု မှာ ..သူတော်စဉ်..ဘ၀..မရောက်ကြသေးပါ….
ထို့ကြောင့်..(ငါ့) တိုင်းပြည်..(ငါ့) ဘာသာ..ဆိုသော..(အစွဲ) ကို..(မချွတ်) နိုင်ကြသေးပါ….
ထိုမှ..(ငါ့) ယဉ်ကျေးမှု..(ငါ့) စကား ..ဆိုတာတွေ…ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရပါသည်….
စစ်ကြီးအပြီး..ဒီဖက်ခေတ်မှာ..လစ်ဖရယ်သမားများက .. Separation of Church and State ဟူသောဘာသာရေး..နှင့်..နိုင်ငံရေး..ခွဲခြားနိုင်မှုကို..ရှေ့တန်းတင်လာကြသည်…အထုးသဖြင့်..အမေရိကားမှာပါ..
အကြောင်းကအမေရိကန်မှာFundamental Christians ဟုခေါ်ကြသောဘာသာရေးအယူသီးသူ၊ဘာသာရေးစိတ်ပြင်းထန်သူများကအားကောင်းသည့်အတွက်ဖြစ်သည်။ဥရောပတွင်တော့Secularism ဟုခေါ်သော ဘာသာရေးကိုဦးစားမပေးသောအတွေးအခေါ်ကအားကောင်းလျှက်ရှိသည်။ဘာသာရေး သမားများ..တပ်ဆုတ်ရသော အခြေအနေတွင်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် Organized Religion ဟုခေါ်သည့် အထက် အောက်အဖွဲ့အစည်း နှင့် အုပ်ချုပ်သော ကက်သလစ်လာသာကဲ့သို့  ဖွဲ့စည်းမှုရှိသော ဘာသာများ ကို ယုံ ကြည်မှု (နည်း)လာကြသည်။
အဓိကအရေးအကြီးသောအချက်မှာ…ဘာသာရေး..နှင့် နိုင်ငံရေးကို ခွဲခြားထားနိုင်ရေးဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးရောထွေးလာသောဘာသာရေးpoliticized religion မဖြစ်စေရေးဖြစ်သည်။
သို့သော်အစ္စလမ်ဘာသာသည်ဘာသာပြန့်ပွားခြင်း…ဘာသာစိုးမိုးခြင်းကို ..ဦးစားပေးသော.. ဘာသာဖြစ် သဖြင့်…နိုင်ငံရေးစိုးမိုးသော…တခုတည်းသော..ဘာသာ..ဟု..ဆိုနိုင်ပါသည်….
အခေါ်ကိုဖြန့်နိုင်ခဲ့သည်။တကမ္ဘာလုံးဆော်ဒီရေနံဒေါ်လာများဖြင့်..ပလီတွေ အနှံ့ဆောက်လျှက်ရှိ သည်။
အဖြစ်အုပ်ချုပ်ရုံမက..၎င်း၏အမိန့်နှင့်..နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်တည်ရှိခဲ့သော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များကို
ယနေ့ အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် အာဏါရရှိလျှက်ရှိသောMuslimBrotherhoodကိုစတည်တည်ထောင်ခဲ့သူသည်။
အစ္စလမ်ဘာသာသည်တခြားဘာသာခြားများကိုမပြောနှင့်၊မိမိတို့ဘာသာအချင်းချင်းတွင်ပင်စူနီများကရှီရာ များကိုသူရဲကောင်းကိုးကွယ်သူတွေ၊အစ္စလမ်စစ်စစ်မဟုတ်ဟု၊အသိမှတ်မပြုရတွင်မက၊ယနေ့ပါကစ္စတန် တိုင်းပြည်တွင်စူနီလူများစုများကရှီရာလူနဲစုကိုသတ်ဖြတ်လျှက်ရှိပြီး၊အစိုးရကလျစ်လျူရှုလျှက်ရှိသည်။ လူနဲစုခရိယန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများကိုဗုံးဖြင့်ပစ်၊စက်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ရစရာမရှိအောင်ဆော်ကားအဓမ္မပြု ကျင့်လျှက်ရှိသည်။ယုတ်မာပက်စက်သူများမှာISIဟုခေါ်သောပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေးမှမွေးထားသူ များဖြစ်သဖြင့်လွပ်လွပ်လပ်လပ်လူများစုကလူနဲစုကိုအနိုင်ကျင့်နိုင်ခွင့်ရှိကြသည်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင်းကိုမဆိုထားဘိ၊အိန္ဒြိယနိုင်ငံထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်တိုးတကလျှက်ရှိသည်ကိုမနာလို ၀န်တိုစိတ်ဖြင့်မွပ်စလင်ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်ဂိုဏ်းကအိန္ဒြိယနိုင်ငံမွန်ဘိုင်မြို့သို့အကြမ်းဖက်သမားများ စေလွှတ်၍အပြစ်မဲ့သူပြည်သူများကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ဂျူးရာဘိုင်လင်မယားကိုတမင်ရှာကာသတ်ဖြတ် ခဲ့ကြသည်။ဤမျှယုတ်မာသောဘာသာရေးအကြမ်းဖက်သူများ၊ မွတ်စလင် ဘာသာဝင်များ မှလွဲ၍ မည်သည့်ဘာသာတွင်ရှိပါသနည်း။
စူနီများသာမဟုတ်။ရှီရားများကလည်း၎င်းတို့လူများစုရှိရာနိုင်ငံများတွင်၎င်း၊လူနဲစုပင်ဖြစလင့်ကစားအာဏါ ရထားသောနိုင်ငံများတွင်စူနီများနှင့်အခြားအစ္စလမ်ဂိုဏ်းခွဲများကိုရက်ရက်စက်စက်နှိပ်ကွပ်လျှက်ရှိသည်။ ရှီရာအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သောအီရန်နိုင်ငံတွင်..စူလဖီများကို ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်ကွပ် လျှက် ရှိဆဲ။ယနေ့ ဆီရီးယားတွင်ရှီရာအနွယ်ဝင်အာလ၀ိုက်(Alawites)များကအာဏါသိမ်းထားရာပုန်ကန်နေသောစူနီများကို လူမဆန်စွာနှိပ်ကွပ်လျှက်ရှိသည်။အဘယ်ကြောင့်နည်း။အကယ်၍အာလ၀ိုက်များရှုံးခဲ့သည်ရှိသော၎င်းတို့ လည်းရက်ရက်စက်စက်အသုတသင်ခံရမည်ကိုအစ္စလမ်ဘာသာဝင်အချင်းချင်းသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆီးရီးယားပြဿနာသည်တကယ်တော့စူနီ-ရှီးရာ ပဋိပက္ခ ပင်ဖြစ်သည်။
ဆူဒန်နိုင်ငံတွင်မြောက်ဖက်မှအာရပ်များသည်တောင်ဖက်ပိုင်းမှခရိယန်များကိုမတရားသတ်ဖြတ်ရုံမက၊ ကျွန်အဖြစ်ပါခိုင်းစား၊ရောင်စားလိုက်ကြသေးသည်။နိုင်ဂျီးရီးယား(Nigeria)တွင်အစ္စလမ်အကြမ်းဖက်သမား များသည်ခရစ်ယန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများအတွင်းသို့လက်ပစ်ဗုံးများပစ်၊စက်သေနပ်များဖြင့်ပစ်ခြင်းများပြု လုပ်နေသည်မှာမကြာခဏပင်။ဤသို့ကိစ္စများတွင် OIC မှဝင်အပြော။
အစ္စလမ်ဘာသာ အမှောင်ကျချိန်….Dark Age of Islam
တချိန်ကခရိယန်ဘာသာသည်လည်း…အမှောင်ထုအတွင်းသို့..ကျရောက်ခဲ့ဖူးသည်။ ခရိယန်ဘုန်းကြီးများ သည် ဘာသာရေးအကြောင်းပြလျှက်ဘာသာမတူသူများကိုရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်အတင်းအဓမ္မဓါးမိုးအုပ်ချုပ်ဖူးခဲ့ကြသည်။မိန်းမတချိုကိုစုန်းမဟုစွပ်စွဲကာအရှငလတ်လတ်မီးတင် ရှို့ ခဲ့ကြသည်။ထို့ကြောင့်အင်္ဂလိပ်စကားမှာ(witch hunt) ဆိုသည်ပင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရသည်။Dark Age ကာလကဘာသာရေးကအဓမ္မဓါးမိုးဖုံလွှမ်းထားသဖြင့်စာပေကအစဘာမှမရှင်သန်နိုင်ခဲ့ကြ။ပြန်လည်ပွင့် လင်းရှင်သန်လာသောRenaissance ခေတ်ရောက်မှ အားလုံးပြန်လည်ပွင့်ဖူးခဲ့ကြရသည်။
စာရေးသူ၏အမြင်အရ..ယနေ့ ..အစ္စလမ်..သည် ဆော်ဒီရေနံဒေါ်လာကြောင့်မာနထောင်လျှက်ရှိသည်။
ယနေ့အစ္စလမ်ကိုတနေ့..ရာဇ၀င်ဆရာများက (၀ဟာဖီ) အစ္စလမ်ဟု သတ်မှတ်ကြလိမ့်မည်ထင်သည်။
စာရေးသူကတော့ယနေ့ဝဟာဖီအစ္စလမ်ကိုအစ္စလမ်ဘာသာ၏အမှောင်ကျချိန်..(DarkAge of Islam) ဟုဆိုင်းဘုတ်တပ်ချင်သည်.
တချိန်ကခရိယန်ဘုန်းကြီးတွေသောင်ကျန်းခဲ့သလို..ယနေ့အစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အများစုသည် ၀ဟာဖီတို့၏ဦးဆောင်မှုနောကလိုက်ကာအဓမ္မနည်းဖြင့်အစ္စလမ်ဘာသာပြန့်ပွားရေးကိုအကြမ်းဖက်နည်း ဖြင့်ဖေါ်ဆောင်ချင်ကြသည်။
ယနေ့..ကမ္ဘာကိုကြည့်လိုက်ပါ….ယနေ့ကမ္ဘာကြီးသည် ..အကြမ်းဖက်မှုများကို ကြောပေး၍ တိုးတက်မှုကို တည်ဆောက်လျှက်ရှိသည်။တကမ္ဘာလုံးအရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာနှင့်တည်ဆောက်နေချိန်မှာ…အစ္စလမ်ကြီး စိုးသော နိုင်ငံများတွင် ၊ အကြမ်းဖက်မှု ၊ အာဏါလုမှု ၊ မတရားသတ်ဖြတ်မှု စသည့် အနိဋာရုံများ နှင့်တွေ့ ကြံနေရသည်။ လူအများမျှော်လင့်ခဲ့ကြသောအာရပ်နွေဦးသည်၊အာရပ်ငရဲအဖြစ်ပူလောင်လျှက်ရှိပြီ။်ဆီးရီးယား၊ရီမင်၊အီဂျစ်၊ဘာရီန်း။အစ္စလမ်စတင်ရာအရှေ့အလယ်ပိုင်းသည်မီးဟုန်းဟုန်း တောက်လျှက်ရှိသည်။
အစ္စလမ်ဘာသာရှိသောနိုင်ငံများတွင်အကြမ်းဖက်မှုများကိုရှောင်၍မရ။ရုရှား၊ တရုတ်၊ဥရောပ၊ထိုင်း၊မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင် ၊ ဆိုမာလီးယား၊ မာလီ ၊ နိုင်ဂျီးရီးယား ၊ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရှိလျှင်အကြမ်းဖက်မှုရှိသည် ။အမေရိကန်နိုင်ငံလည်းအစ္စလမ်အကြမ်းဖက်သမားများ၏လုပ်ကြံမှုကိုအမြဲစောင့်ကြည့်နေရသည်။အစ္စလမ် ဆိုတာနဲ့..အနောက်က..အကြမ်းဖက်မှု..က ကပ်ပါလာသည်။
၀ဟာဖီ နှင့် ဘင်လာဒင်၏သြဇာသက်ရောက်မှု
၀ဟာဖီနှင့်ဘင်လာဒင်၏သြဇာသက်ရောက်မှုသည်မသေးပါ။တကမ္ဘာလုံးရှိအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အများစု သည်ဗြောင်ကျကျတဖုံ၊တိုးတိုးတိတ်တိတ်တသွယ်၊တချို့ကကျိပ်၍စိတ်ထဲတွင်အစ္စလမ်အကြမ်းဖက်သမား များကိုထောက်ခံကြသည်ဟုစာရေးသူကခံစားမိသည်။ထို့ကြောင်အစ္စလမ်ဘာသာသည်ငြိမ်းချမ်းပါသည်ဟု အစဉ်ဟစ်ကျွေးနေကြသောအစ္စလမ်ပညာရှင်ဘယ်နှစ်ယောက်အစလမ်အကြမ်းဖက်မှုကိုပေါက်ပေါက် ရောက်ရောက်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသလဲ။ကိုရန်ကျမ်းဂန်သည်တကယ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖေါ်ညွှန်းသည်မှန်လျှင်။ အကြမ်းဖက်သမားများကိုရန်ကိုဘာသာပြန်ဆိုမှုသော်၎င်း၊နားလည်မှုသော်၎င်းမှားပါသည်ဟုကိုရန်ကျမ်းကို ရည်ညွှန်း၍အကြမ်းဖက်သမားများကိုတကမ္ဘာလုံးကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်များနှင့်ပညာရှင်များမရှုံ့ချ၊မကန့် ကွက်ဖူးလား။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ယနေ့အစ္စလမ်ဆိုသည်နှင့်တကမ္ဘာလုံးကအကြမ်းဖက်သမားများဟုမြင်နေကြပြီ။အကြမ်းဖက်သမားများကြောင့်အစ္စလမ်ဘာသာနံမည်ပျက်ရပြီ။
စာရေးသူ၏သုံးသပ်ချက်အရ၊ငြိမ်းချမ်းပါသည်ဆိုသောအစ္စလမ်ဘာသာဝင်များသည်၊ဒို့ဘာသာဟူသောအဆွဲနှင့်ကြိပ်အားပေးနေ၍သော်၎င်း၊ကိုရန်တွင်အတိအလင်းဖေါ်ပြထားသော(ဂျီဟပ်)ဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ် တွင် (အကြမ်းဖက်မှု) ပါ၍ မငြင်းသာ သည်မို့ဖြစ်ပေမည်။
ယနေ့၂၁ရာစုခေတ်၊ဒီမိုကရေစီထွန်းကားတိုးတက်နေသည့်ခေတ်ကြီးတွင်တခြားဘာာများသည်နိုင်ငံရေး နှင့်ဘာသာရေးခွဲခြားနေချိန်တွင်အစ္စလမ်ဘာသာတခုထဲသာနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးကိုရောထွေးလျှက်ရှိ သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များသည်သူတို့လူနဲစုဖြစ်သောနိုင်ငများတွင်မိမိတို့အစ္စလမ်ဘာ သာဝင်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုကိုအတင်းအဓမ္မထူထောင်ကြသည်။ဥပမာမိန်းမများလုံးဝဥသုံခေါင်းပူးခြုံစေ၍ ယေက်ျားများမှာမုဆိတ်မွှေး၊ပသိုင်းမွှေးအရှည်ကြီးများထားကာမွတ်စလင်ဝတ်ဆုံများကိုဝတ်၍အစ္စလမ်ယဉ် ကျေးမှုကိုဖေါ်ဆောင်ကြသည်။အစ္စလမ်အများစုကြီးစိုးသောနိုင်ငံများတွင်မူလူနဲစုဘာသာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကို လုံးဝသည်းညည်းခံခြင်းမရှိရရုံမကဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုကိုကျူးလွန်လျှက်ရှိကြပါသည်။ဥပမာအီဂျစ်မှာကော တစ်ခရစ်ယန်များကိုMuslim Brotherhood အစိုးရတက်လာသည်နှင့်ဖိနှိပ်မှုများ၊များပြားလာသည့်အတွက်ကောတစ်ခရိယန်ဝင်များအီဂျစ်မှထွက်းပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသည်မှာယနေ့အထင်အရှားဖြစ်သည်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင်လူနဲစုခရိယန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများအတွင်းဝင်၍သေနပ်ဖြင့်ပြစ်ချင်း၊ဗုံးဖေါက်ခြင်းများ မှာမကြာခဏပင်ဖြစ်သည်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်လည်းထိုနည်း၎င်းပင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကြမ်းဖက်သ မားများကခရစ်ယန်များကိုသတ်ဖြတ်လျှက်ရှိသည်။
အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များသည်တခြားဘာသာဝင်များကိုလေးစားဖို့နေနေသာသာ၊စူနီရှီရာပြိုင်ဆိုင်မှုပဋိက္ခတွင်၊အီရတ်စူနီများသည်ရှီရာတို့တမြတ်တနိုးထားရာပလီကျောင်းများကိုဗုံးခွဲပျက်စီးခဲ့ကြသည်။ အာဖရိကမှမာလီနိုင်ငံကိုအစ္စလမ်သူပုန်များသိမ်းပိုင်ထားစဉ်၊တင်ပတ်တူဟူသောမြို့ရှိအစ္စလမ်ဂိုဏ်းခွဲ စူလဖီတို့၏အမြတ်တနိုးထားရာရှေးဟောင်းအဆောက်အဦများကိုဗုံးခွဲပျက်စီးခဲ့ကြသည်။
ဤဖြစ်ရပ်မှာလောလောလပ်လပ်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည်။နောက်ဆုံးပြင်သစ်မှဦးစီး၍၀င်တိုက်မှအစ္စလမ်သူပုန်များ ခွေးပြေးဝက်ပြေး၊ပြေးခဲ့ကြရသည်။အာဖကန်တွင်တာလဖန်တွေစိုးမိုးစဉ်ကမိုလာအိုမာ၏အမိန့်ဖြင့် နှစ်၂၀၀၀ကျော်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များကိုဖျက်စီးခဲ့ကြသည်။ဤသာဓကဖြစ်ရပ်များကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့ သည်မိမိအယူသည်းမှုနှင့်မတူသောတခြားဘာသာများကိုလေးစားရမှန်းပင်မသိကြဆိုတာကိုပြသနေသည်။
အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များသည်ယုံကြည်မှု၊ယဉ်ကျေးမှုသာမကဥပဒေတွင်လည်းရှရီယာ(Shria)ဥပဒေပါလာ ပြန်သည်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များသည်လူနဲနဲစုမိကြသည်နှင့်ရှရီယာဥပဒေကျင့်သုံးခွင့်ပြုရမည်ဟုတောင်း ဆိုလာတတ်ကြပြန်သည်။ဥရောပနိုင်ငံအချိုတွင်၎င်း၊အမေရိကန်ဖရော်လီဒါပြည်နယ်တွင်၎င်း၊အစ္စလမ်ဘာ သာဝင်များကရှရီယာဥပဒေကျင့်သုံးခွင့်ပြုရမည်ဟုတောင်းဆိုနေကြပေပြီ။
အစ္စလမ်သာသနာကြီးစိုးသောနိုင်ငံများတွင်ဘာသာကိုစော်ကားသူအား သေဒဏ်အထိ အပြစ်ပေးနိုင်သော Blasphemy Lawဆိုတာရှိသည်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆရာတဦးက ၊ ကြပ်မပြည့် သော အရွယ် မရောက်သေးသော ခရစ်ယန်ရောဂါ သည်ကလေးကို လုပ်ကြံ၍တိုင်တည်သောကြောင့်ပုလိပ်ကဖမ်း ကာ အရေးယူသဖြင့် ကမ္ဘကျော်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး လည်ဆည်တိုင်တည်တာပေါ်သွား၍ သူငယ်မကလေး မှာ လွပ်မြောက်သွားသော်လည်း ၊ လိမ်လည်တိုင်းတန်းသူ ဘာသာရေးဆရာကို အရေး ယူသည်ဟု မကြား မိ။ ယနေ့ ၂၁ရာစုခေတ်ကြီးတွင် ဤသို့အရေးယူသော ဘာသာ အစ္စလမ်မှလွဲ၍ရှိပါတော့သနည်း။ ဥပဒေရှိရုံမက ၊ လိုက်နာကျင့်သုံးမှု ကိုဆိုလိုပါသည်။
ဤစံထုံးအရ ဆိုလျှင်ဘုရားသားတော် များကို စော်ကားမော်ကားရေးသူများကိုဖမ်း၍ အရေးယူစရာပင်ရှိ တော့သည်။
ဤသို့(ငါ့)ဘာသာ၊(ငါ့)ယဉ်ကျေးမှု၊(ငါ့)တရားစီရင်ရေးတွေအသာစီးရရှိရေးအတွက်အကြမ်းဖက်မှုကိုပြုကျင့် ရန်ဝန်မလေးကြ။မိမိဘာသာလူများစုဖြစ်သောအခါလူနဲစုတခြားဘာသာဝင်များကိုညှာတာရမှန်းမသိသော အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များသည်၊တခြားဘာသာဝင်များနှင့်မတဲ့ပဲ၊တကမ္ဘာလုံး၊တခြားဘာသာများနှင့်ရန်လိုအ ကြမ်းဖက်မှုဖြစ်နေသည်မှာမဆန်းလှပေ။အိန္ဒြိယတွင်ဟိန္ဒူများ၊အမေရိက၊ဥရောပနှင့်ဖိလစ်ပိုင်တို့တွင်ခရစ် ယန်များ၊မြန်မာနိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင်ဗုဒ္ဓဘာသာများ၊အရှေ့အလယ်ပင်းတွင်ဂျူးများ၊ဘာသာကြီးအားလုံး နှင့်လှည့်ပတ်ရန်ဆောင်နေသောဘာသာမှာအစ္စလမ်ဘာသာတခုထဲသာရှိပေသည်။ထို့ပြင်ရုရှား၊တရုတ်မ ကျန်လှည့်ရန်ဆောင်လိုက်သေးသည်။
ထို့ကြောင့်အစ္စလမ်ဘာသာသည်ဘာသာရေးကျူးကျော်သောဘာသာ၊aggressive politicized religion ဟုဆိုချင်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွင် ဘင်္ဂါလီအစ္စလမ် ဘာသာဝင် များသည်ကျူးကျော်နယ်ချဲ့ကာဘာသာရေးလူမျိုးရေးလွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားလျှက်ရှိသည်၊အစီအစဉ် ရှိသည်ကိုမေ့ထား၍မရပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာသည်… Defensive ဘာသာဆိုသည်မှာ ထင်ရှားနေပါပြီ…..
အစ္စလမ်ဘာသာ၏ နယ်ချဲ့မှုကို လျစ်လျူ ရှိုခဲ့လျှင် ဗမာတွေ မွတ်စလင်ဖြစ်ကုန်ပေလိမ့်မည်။
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးမိုင်းအခွဲခံရတာကို ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေ ခံနိုင်မှာလား။
အစ္စလမ်ဘာသာကိုမမုန်း ၊ မတရားမှုကိုတော့ လက်မခံနိုင်ပါ။
ဒီမိုကကရေစီကိုယုံကြည်သူ၊တရားမျှတမှုကိုလက်ခံလေးစားသောသူတစ်ယောက်အနေနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုသော်၎င်း၊နိုင်ထက်စီးနင်းသတ်ဖြတ်မှုများကိုသော်၎င်း၊စာရေးသူသည်ဘယ်လိုမှအားမပေးနိုင်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းဘယ်နေရာမှာမှသတ်ဖြတ်မှုကိုအားမပေးပါချေ။ဗုဒ္ဓဘာသာသည်မိမိကိုယ်အတွက်မိမိ ဆုံးဖြတ်ရသောဘာသာဖြစ်သောကြောင့်ဘာသာကိုကာကွယ်သူမျးသည်ဗုဒ္ဓဘာသာအရဤဘ၀တွင် နိဗ္ဗာန်ရဖို့အခွင့်အလန်းကိုစွန့်၍ခုခံကာကွယ်ကြရသည်ပါ။မိမိဘာသာကိုမကာကွယ်ပြန်လျှင်လည်းမိမိတို့ရှေ့ တွင်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်သောအာဖကန်နှင့်အင်ဒိုနီးရှားတို့အစ္စလမ်ဘာသာအောက်ရောက်သွားရသည့်သာ ဓကများလည်းရှေ့တွင်ရှိနေပါသည်။ထို့ကြောင့်မိမိဘာသာကိုမကာကွယ်၍လည်းမရနိုင်ပါ။
စိတ်လွန်ကိုယ်လွန်ဖြစ်မိသူများလည်းရှိပေမပေါ့။သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုယ်နှိုက်ကအကြမ်းဖက်မှုကိုလက်မခံ၊ ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော်၊အရေးယူမည်ဟုရေဒီယိုကကြေညာပြီးပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေသမာသမတ်ကျတာ ကမ္ဘာကိုသိစေခဲ့တာပါ။
ဤမျှဆိုလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်မှု နှင့်ဘာသာကာကွယ်တာကို ခွဲခြားသိမြင်လောက်ပါပြီ။
ဧပြီလ (၄)ရက် ၂၀၁၃ခု
http://bokyawnyein.blogspot.co.uk/ Bo K Nyein At the airport with media — in Rangoon.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/08/2013 1 အကြံပြုခြင်း
၉၆၉စတေကာဝေတဲ့လူငယ်တွေကို အုပ်စုဖွဲ့ဓားနဲ့ထိုးတဲ့ သူ များကို ဖမ်းမိ
မင်းလားကွ ၉၆၉ ဝေတဲ့ကောင်ဆိုပြီး အောင်ဇေယျကြိုးတံတားနားမှာ ဓားနဲ့ထိုးတဲ့သူ ကို ရဲကဖမ်းနေစဉ်
ထိုအဖွဲ့သည် ၁၀ယောက်ကျော်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ် ။လောလောဆယ် ၅ ယောက်ဖမ်းမိထားပါတယ်။
အသေးစိတ်ကို လှိုင်သာယာ သာယာကုန်း ပရဟိတ အဖွဲ့ကို သွားရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
Ko Kyaw Swar
မန္တလေးမှာ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကောလာဟလ လေးပြောချင်ပါတယ်ဆရာ
ကုလားတွေ အက်စစ်ကို ပုန်းလိုက် ဝယ်ယူစုဆောင်းနေကြောင်း
သင်္ကြန်မှာ တစ်ယောက်ယောက်များ အက်စစ်နဲ့အပက်ခံလိုက်လို့ကတော့.....
တန့်ယန်း စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအားလုံး အောင်မင်္ဂလာကျောင်း၌သာ စုပုံထား
Monday, April 08, 2013 Posted by သျှမ်းသံတော်ဆင့်
သျှမ်းပြည်တပ်မတော် နှင့် အစိုးရတပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲကြောင့် တန့်ယန်းမြို့ပေါ်သို့ ပျံ့နှံ့နေသည့် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် များ အောင်မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်၌ စုပေါင်းနေထိုင်စေခဲ့ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
“အစတုန်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ သွားနေကြတာ။ အခု အောင်မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်မှာပဲ လာနေဖို့ လိုက်ခေါ်နေ တယ်။ မနေ့က ၄၃၁ ယောက်ရှိပြီ။ စစ်မျက်နှာပြင်ဘက်က ထပ်ရောက်လာတာလဲရှိတယ်၊ မပြန်နိုင်ကြသေးဘူး” - ကျားဖြူ ပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် စိုင်းထွန်းထွန်းဝင်း က ပြောပါသည်။
မတ်ခ်ျလနှောင်းပိုင်းမှ ယနေ့အထိ တန့်ယန်းမြို့ဘက်ရောက်ရှိလာသော စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်များ ထောင်ကျော် ကြောင်း၊ ပလောင်များ၊ တရုတ်လူမျိုးများက ၎င်းတို့အမျိုးရှိရာ ပန်ယရုံး၊ မြို့သစ်ဘက် သွားနေကြောင်း၊ အောင်မင်္ဂလာ ကျောင်းတိုက်တို့ စုပေါင်းနေစေရခြင်းမှာ ရေမီး နေရာထိုင်ခင်းအဆင်ပြေ မှု အသင့်အသင့်ရှိကြောင်း စစ်ဘေးရှောင် များ အားလိုက်လံကူညီပေးနေသည့် ကျေးသီးမြို့မှ စိုင်းခမ်းဆိုင်က ဤကဲ့သို့ပြောပါသည်။
“ပလောင်လူမျိုးတွေက ခက်တယ်။ သူတို့က အဝတ်အစားဘာမှ မရလာဘူး။ ပလောင်ယောက်ျားလေးတွေက သူများ ပေး ကမ်းတဲ့ အဝတ် ဝတ်သေးတယ်။ မိန်းခလေးတွေကတော့ သူတို့ဝတ်စုံမှ သူတို့ဝတ်စုံဘဲ။ တခြား ဝတ်စုံမဝတ်ဘူး။ သူတို့တွေက သူများနဲ့မနေတတ်ဘူးလေ။ သူတို့အမျိုးရှိရာ စစ်မဖြစ်တဲ့ရွာဘက်ကိုဘဲ သွားနေကြတယ်” - ဟု ဆိုသည်။
ယမန်နေ့အထိ ကူညီမှုပေးသည့် အသင်းအဖွဲ့များများစားစားမရှိသေးကြောင်း၊ အဲန်ဂျီအိုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် အိုင်စီအာရ် စီ သာတွေ့ရကြောင်း၊ ဒေသခံ မိုင်းရယ်၊ လားရှိုး၊ ကျေးသီးဘက်မှ စုပေါင်းလူထုအလှူရှင်းများ လာရောက်ကူညီကြောင်း ကူညီမှုတွင်ပါဝင်သည့် တန့်ယန်းလူငယ် စိုင်းခေးက ဤကဲ့သို့ပြောပါသည်။
“အခုလာတာက ကျေးသီး၊ မိုင်းရယ်၊ လားရှိုး။ ငွေတွေ စောင်တွေ၊ အိုးခွက်ပန်းကန်တွေလာပေးတယ်။ လားရှိုးဘက်က လာတဲ့ လူငယ်နဲ့ ကျားခေါင်းလူငယ်အဖွဲ့ စုပေါင်း အင်အား ၂၀ ခန့်က ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ လိုက်လံအလှူခံပြီး လာကူ တယ်။ ပိုက်ဆံ ကျပ် ၄၅ သိန်း၊ စားဖွယ်သောက်ဖွယ် စောင်၊ အိုးခွက်ပန်းကန်တွေ လာပေးတယ်။ လားရှိုး - တန့်ယန်း နေ့ချင်းပြန်ဘဲလာသွားတယ်” - ဟု ပြောသည်။
“အစိုးရတပ်၊ သျှမ်းတပ် နှစ်ဘက်ညှိပြီးမှ သူတို့တွေ နေရပ်ပြန်နိုင်မှာပေါ့။ အခုက အစိုးရတပ်ကို လူထု အကြောက်ဆုံး၊ သူတို့က လူထုကိုခေါ်ပြီးလှမ်းပြခိုင်းတယ်။ လူထုကို ပွိုင့်ထိုးခိုင်းတယ်။ မိုင်းနင်းမိရင် လူထု အရင်သေတယ်။ မုဒိန်းကျင့် သတင်းတွေလဲ သတင်းပျံ့နေတော့ ဘယ်ပြန်ရဲတော့မလဲ၊ အားလုံးတာဝန် ရှိတယ်။ အစိုးရက ပိုတာဝန် အရှိဆုံးပေါ့ သူတို့က အာဏာရှိတယ်။ သူတို့ က နယ်မြေစိုးမိုးဖို့ တောနင်းပြီး နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလို့အခုလိုဖြစ်ရတာ” - တန့်ယန်းမြို့ ကျားဖြူပါတီဝင် ရပ်မိရပ်ဖတဦးက ပြောပါသည်။
သျှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA နှင့် မြန်မာအစိုးရတို့သည် အပစ်ရပ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး စုပေါင်းတည်ဆောက်နေသည်ဟု ဆိုတော်လည်း ယနေ့တိုင် စစ်မီးငြိမ်းခြင်းမရှိပဲ အပစ်ရပ်ပြီးနောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲပေါင်း တရာထက်မနည်းဖြစ်ပွားပြီးဖြစ်သည်။
နမ့်ခမ်း ပန်းဆေးပြည်သူ့စစ်တပ်စခန်း တိုက်ခိုက်ခံရ Monday, April 08, 2013 Posted by သျှမ်းသံတော်ဆင့်
ယနေ့နံနက်ပိုင်း၌ ပန်းဆေးပြည်သူ့စစ်တပ်စခန်းအား တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ပေါင်းစုဟု ယူဆရသည့် အဖွဲ့က သွားရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်သည်ဟု နမ့်ခမ်းရောက်ပန်းဆေးဒေသခံများက ပြောပြပါသည်။
“ဒီမနက် ၄ နာရီကနေ မနက် ၈ နာရီလောက်အထိ သွားတိုက်တယ်။ နောက်မွန်းတည့်ချိန်မှာ နောက်တကြိမ် ထပ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ ပန်းဆေးဘက်မှာဘဲ။ စခန်းကိုမီးရှို့ပြီး ပြန်ထွက်သွားတော့ အဲဒီလာတိုက်တဲ့အဖွဲ့က သျှမ်းတွေ၊ ပလောင်တွေ၊ ကချင်စကားတွေ ပြောတယ်လို့တော့ ပြောတာဘဲ ဒေသခံတွေက” - ဟု ဒေသခံ နမ့်ခမ်း သျှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဝင် စိုင်းခမ်းလုံ ကပြောပါသည်။
ယနေ့နံနက် (ဧပြီ ၈ ရက် ၂၀၁၃) ပိုင်း၌ အဆိုပါ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က နမ့်ခမ်းမြို့ အရှေ့ တောင်ဘက် ၁၅ မိုင် ခန့်ဝေးသည့် ပန်းဆေးကျေးရွာအုပ်စုရှိ ပန်းဆေးပြည်သူ့စစ်တပ်စခန်းအား တိုက်ခိုက်ခဲ့ ကြောင်း၊ ပန်းဆေးဒေသရှိ တာ့ပန်းကုန်း နှင့် ရှောက်ပန်းကုန်း ရှိ တပ်စခန်းသုံးခုအနက်နှစ်ခုအား မီးရှို့ဖျက်စီး လိုက်ကြောင်း၊ သေကြေဒဏ်ရာရှိမှုလည်း ရှိကြောင်း ဒေသခံများပြောပြချက်အရ သိရပါသည်။
“စခန်းနှစ်ခုက ပြည်သူ့စစ်တွေနေတဲ့ စခန်းမဟုတ်ဘူး။ ဘိန်းချက်စခန်း၊ ယာဘ၊ ဘိန်းဖြူလုပ်တဲ့စခန်းတဲ့။ အဲဒါကြောင့်မီးရှို့ပစ်လိုက်တာတဲ့” - ဟု တပ်ပေါင်းစုနှင့် နီးစပ်သူ ဒေသခံတဦးကပြောပါသည်။
“နမ့်ခမ်းဆေးရုံမှာ အခုချိန်အထိ (၁၅ နာရီခွဲ) လူနာတွေရောက်လာတာတော့မတွေ့ရဘူး။ မြို့မပြည်သူ့စစ် တပ်ဖွဲ့ကတော့ လက်နက်အပြည့်နဲ့ အသင့်ပြင်ထားတယ်။ အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုစောင့်နေတာတဲ့။ စောင့်နေ တုန်းပဲ။” - နမ့်ခမ်းသား စိုင်းရီလုံး က ပြောပါသည်။
ပန်းဆေးပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့သည် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ် ပန်းဆေး ဦးကျော်မြင့် က ဦးဆောင်သည်။ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ အင်အား ရာဂဏန်းရှိသည်။ အစိုးရခိုင်း သမျှလုပ်ပြီး စီးပွားရေးအခွင့်ထူးများ လက်ဝါးကြီးအုပ်သည့်သူဟု နိုင်ငံရေး စစ်ရေးအသိုင်းအဝိုင်းကစွပ်စွဲထားပြီး သျှမ်း ပြည်မူးယစ်ဆေးဝါး စောင့်ကြည့် ရေးအဖွဲ့ကလည်း ၎င်းအား ခေတ်သစ်မူးယစ်ရာဇာအဖြစ် စာရင်းသွင်း ထားသူဖြစ်သည်။ http://panglongburmese.blogspot.co.uk/2013/04/blog-post_8.html
ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မာဂရက်သက်ချာ လေသင်တုန်းဝေဒနာဖြင့် ကွယ်လွန် (8-4-2013)
ခွန် ဒီးယမ်'s photo.
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား (MRTV) ဟာ လက်ရှိ ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Analog စနစ်အစား ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ပြောင်းပြီး Set-top Box နဲ့ ဖမ်းယူကြည့်ရှုရတဲ့ စနစ်ကို အစားထိုးမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။
ဒီအတွက် မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား ရုပ်သံလိုင်းဟာ receiver နဲ့ ဖမ်းယူကြည့်ရှုရတဲ့ တတိယမြောက် ရုပ်သံအစီအစဉ် ဖြစ်လာမှာပါ။ လောလောဆယ် MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းနဲ့ မြ၀တီရုပ်သံလိုင်းတွေက Set-top Box အသုံးပြု ဖမ်းယူကြည့်ရှုတဲ့စနစ်နဲ့ ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။
မြန်မာ့ရုပ်သံဟာ ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ပြောင်းပြီး receiver နဲ့ ထုတ်လွှင့်နိုင်ဖို့အတွက် Set-top Box ပေါင်း ၁ သန်း ၀ယ်ယူလိုကြောင်း တင်ဒါ ခေါ်ယူထားပါတယ်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်ကလည်း မြန်မာ့ရုပ်သံကို အများပြည်သူ ၀န်ဆောင်မှု မီဒီယာအဖြစ် ပြောင်းဖို့ရှိပြီး ဘီဘီစီအသံလွှင့်ဌာနလို ဖြစ်လာမယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်း ဂျပန် မိုင်အိနီချိ သတင်းစာနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မိတ္ထီလာ ရွှေဆိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်သူ ၃ ဦးကို အမှုစစစ်
Published on April 8, 2013 by ရွှေအောင်
မိတ္ထီလာမြို့ ပဋိပက္ခစခဲ့တဲ့ ရွှေဆိုင်ရန်ဖြစ်မှု ဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့သူတွေကို မိတ္ထီလာမြို့နယ် တရားရုံးမှာ တရားစွဲဆိုဖို့ ဒီကနေ့ အမှုစတင်စစ်ဆေးနေပြီလို့ မန္တလေးတိုင်းဥပဒေချုပ် ဦးရဲမြင့်အောင် က ပြောပါတယ်။
မိတ္ထီလာပဋိပက္ခမှာ ပထမ အစပျိုးခဲ့တဲ့ ရွှေဆိုင် ရွှေရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စမှာ ပါဝင်ခဲ့သူ ၄ ဦးထဲက ၃ ဦးကို စတင်စစ်ဆေးလိုက်တာဖြစ်ပြီး တဦးကတော့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတာမို့ တရားခံပြေး အမှုအနေနဲ့ စွဲဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။
စွဲဆိုမယ့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့ ကျခံရနိုင်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်တွေကိုလည်း ဦးရဲမြင့်အောင်က ခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“ပထမဆုံးဖြစ်စဉ်မှာတော့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၈၂၊ အဲဒါက ပစ္စည်းယူပြီး ဒဏ်ရာရအောင်လုပ်ပြီး ပြင်ဆင်ပြီး နာကျင်စေအောင် လုပ်တာပေါ့။ ဒါဆိုရင် ပုဒ်မ ၃၈၂ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေက ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ကတော့ ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ပါ။ နောက် ရိုက်လိုက်တယ်၊ အရိုးတွေကွဲသွားတယ် ဒါကျတော့ နာကျင်စေမှုပေါ့။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၃၂၆ ပြင်းထန်စွာနာကျင်စေမှုဆိုရင် အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ် တသက်တကျွန်းရှိတယ်။ ဆဲဆိုတာကျတော့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၉၄ အရ ထောင်ဒဏ် ၃ လ။ တဦးထက်ပို ကျူးလွန်တယ်ဆိုရင် ပုဒ်မ ၁၁၄ အရ အားပေးကူညီသူဖြစ်တယ်။ အားပေးကူညီတွေကတော့ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကဲ့သို့ ပြစ်ဒဏ်များကို စီရင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။”
မိတ္ထီလာပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဟာ ရွှေဆိုင်အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စက ပထမဖြစ်ပြီး ဒုတိယဖြစ်စဉ်ကတော့ သံဃာတော်တပါးကို ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ အဆင်ခြင်မဲ့လူတစုကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒုတိယ ဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ လူတစုဟာ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် သိထားတာ ၉ ဦးဖြစ်ပြီး လောလောဆယ် ၆ ဦး ဖမ်းမိထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို ဒီလူတစုကပဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုင်းဥပဒေချုပ် ဦးရဲမြင့်အောင်က အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျနော်က ဖြစ်စဉ် ၂ ခုကို ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့ သက်ဆိုင်ရာ ကျူးလွန်သူတွေကို ဆက်လက် စုံစမ်းဖော်ထုတ်သွားမှာပါ။ နောက်ထပ်အမှုတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဆက်လက်စုံစမ်းအရေးယူ ဖော်ထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။”
မိတ္ထီလာပဋိပက္ခအတွင်း ဥပဒေဖောက်ဖျက်ကျုးလွန်ခဲ့သူတွေကို တရားဥပဒေအတိုင်း အရေးယူဖို့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဆောင်ပြီး ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
မိတ္ထီလာမြို့ ပဋိပက္ခစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုလည်း တိုင်းနယ်စပ်ရေးရာနဲ့ လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကျော်မိုး ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဒီနေ့ထိတော့ အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ်လာခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခများကြောင့် ၄၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး လူနေအိမ် ၁၂ဝဝ ကျော်၊ ဗလီ ၃၇ လုံး၊ ဈေးဆိုင် ၇၇ ခုလည်း ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့က တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်မှာ လူ ၁ သောင်းလောက် ဒုက္ခသည်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ရဲက လူ ၆၈ ဦးကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဟာ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးကို မှန်မှန်လုပ်နေပါတယ် – ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း
“ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဟာ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးကို မှန်မှန်လုပ်နေပါတယ်။ သူတို့ ၀တ္တရားမပျက်စေရဘူးဆိုတာ အာမခံလိုက်တာဖြစ်တယ်” လို့ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗကပ) ပြောခွင့်ရ ရဲဘော် ဖိုးသံချောင်းက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအနေနဲ့ စတင်တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကတည်းက လူထုကို အကြမ်းဖက်တဲ့နည်းတွေနဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်အောင် လျှောက်လုပ်တာမျိုး ဘယ်တုန်းကမှ အားမပေးခဲ့ဘူးလို့ ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်းက ပြောပါတယ်။
မိတ္ထီလာမြို့ ပဋိပက္ခကို ဗကပဩဇာခံတွေက အဓိကလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဗဟိုအတိုင်ပင်ခံ ဦးအောင်သောင်းက ဧပြီ ၆ ရက်ထုတ် မြန်မာသံတော်ဆင့်ဂျာနယ်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့အပေါ် ဗကပရဲ့ သဘောထားအမြင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်းက ခုလို ပြောလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရဲ ဘော်ဖိုး သံ ချောင်း
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ ဦးအောင်သောင်းက မိတ္ထီလာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ ဗကပ ဩဇာခံတွေက လုပ်သွားတယ်။ အဓိက လှုံ့ဆော်သူအဖြစ် လုပ်သွားတာလို့ သူက စွပ်စွဲပြောကြားသွားတယ်။ အဲဒီအပေါ် ဘာများပြောချင်ပါလဲ။
“အခုအခါမှာ အဲကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အစိုးရမှာ အကျပ်အတည်းတွေ့နေတယ်။ သူတိုို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထားတာတွေဖြစ်နေတော့ ဖြေရှင်းရခက်နေတယ်။ အဲအချိန်မှာ သူတို့က အလွယ်ကူဆုံး ပုံချလို့ရဖို့အတွက် တွေ့ကရာဆွဲ ဖော်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအနေနဲ့ ဒါတွေနဲ့ ဘယ်တုန်းကမှလည်း မပတ်သက်ခဲ့ဖူးဘူး၊ မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး။ သူတို့က အဲမှာရှိနေသူတွေကို ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ ပြောလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် စွပ်စွဲလို့ရထားသမျှ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ စတေးမယ့်သူတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူတော့မယ့်ဟန် ပြည်သူလူထုကို ဖော်ပြလိုက်တာ။ ဟန်လုပ်တာလို့ ထင်တယ်။ ရိုးသားတဲ့ပြောဆိုမှုလို့ မယူဆဘူး။”
အမေရိကန်သံအမတ်ကို ဒီလိုစကားမျိုးပြောလိုက်တာ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်၊ ဘယ်လိုသဘောမျိုး သက်ရောက်သွားလဲ။
“အမေရိကန်သံအမတ်ကို ဒီလိုစကားမျိုးပြောလိုက်တာဟာ သူတို့ဟာ ပြည်တွင်းမှာ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေး မှန်မှန်လုပ်နေတယ်၊ ၀တ္တရားမပျက်စေရဘူးဆိုတာ အာမခံလိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ထင်တယ်၊ အမေရိကန်သံအမတ်ကလည်း သူတို့ ပြောတိုင်းမယုံပါဘူး။ သံတမန်ရေးရာအရတော့ လက်ခံရတာပေါ့လေ။ အဲလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ပြောတဲ့စကားဆိုတော့ နှစ်ဖက်လုံး သံတမန်သဘောပိုဆန်တယ် ထင်တယ်။”
မြန်မာပြည်မှာ လက်ရှိ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ပါတီ ၅၀ ကျော်ရှိတဲ့အထဲ အမေရိကန်သံအမတ်က ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေကို သွားတွေ့တာက ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးချင်ပါလဲ။
“သိပ်တော့ မထူးဆန်းပါဘူး။ အာဏာရပါတီကို တချို့ကိစ္စတွေမှာ ဦးစားပေး ဆက်ဆံတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံကမဆို လုပ်လေ့ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ အထွေအထူးပြောစရာ မရှိပါဘူး။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တမျိုးလို့ နားလည်ပါတယ်။”
အရင် စစ်အစိုးရလက်ထက်ကလည်း ဒီလိုပဲ ဗကပ ကို စွပ်စွဲလေ့ရှိတယ်လေ။ ဒီမိုကရေစီသွားနေတဲ့ ဒီဘက်ခေတ်မှာ အာဏာရပါတီ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တဦးက ထပ်စွပ်စွဲလိုက်တာက။
“ကျနော်တို့မြင်နေတာက လက်ရှိအစိုးရဟာ သူတို့ဘယ်လို ဟန်ဆောင်မှုတွေ၊ ၀ါဒဖြန့်မှုတွေလုပ်သည်ဖြစ်စေ သူတို့အရိုးထဲအသည်းထဲက အဆက်ဆက်ရှိခဲ့တဲ့ မုန်းတီးမှုတွေ၊ အာဃာတတွေကို ဘယ်လိုမှ မဖျောက်နိုင်ဘူး။ အဲဒါတွေအရ ဆက်လုပ်နေသေးတယ်၊ ရှေ့လည်းဆက်လုပ်ဦးမယ်။ အခုအခါ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းပေါ်လာတာနဲ့ အဲ အသွင်အပြင်တွေနဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေ ပြန်ဖော်ပြလာတယ်။ ဥပမာ လက်ပန်းတောင်းကို အပြင်းအထန် နှိမ်နင်းတာကအစ အကုန်။ သူတို့ရဲ့ အတွင်းလက္ခဏာတွေ ပေါ်လာတယ်။ တဆက်တည်း ဗကပကို ပုံချတာက အရင် အကျင့်ဟောင်း ဖော်ပြလာတာလို့ပဲ ယူဆတယ်။”
အရေးအကြောင်းရှိတိုင်း ဗကပ၊ ယူဂျီတွေလို့ ပြောပြောနေတာကို ပြည်သူလူထုတွေကလည်း ရိုးနေပါပြီ။ ဘာလို့ ထပ်တလဲလဲပြောနေတယ်လို့ ဆရာယူဆပါလဲ။
“မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးမှာ ဗကပနဲ့ သူတို့နဲ့ လုံးဝမဆက်ဆံဘူး။ ဗကပကိုပဲ တရားခံတယောက်လို့ လက်ညှိုးထိုးထားလို့ရအောင် လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။။ သူတို့ထုံးစံ လုပ်တဲ့အစဉ်အလာက သူတို့မှာ ရန်သူတယောက် အမြဲထိုးပြထားဖို့ လိုတယ်။ ရုပ်ရှင်းကားတွေလိုဆိုရင် လူဆိုး၊ ဗီလိန်ပေါ့။ အဲလို ထိုးပြနိုင်ဖို့ ကြံဖန်ပြီး ဖန်တီးတဲ့ လုပ်ကွက်တခုလို့ မြင်တယ်။”
မတ်လအတွင်းဖြစ်သွားတဲ့ မိတ္ထီလာပဋိပက္ခအပါအ၀င် ပဲခူးတိုင်းအနောက်ပိုင်း အကြမ်းဖက်ဖြစ်ပွားမှုတွေ အပေါ်မှာရော ဗကပ အနေနဲ့ ဘယ်လိုသုံးသပ်ပါလဲ။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေဟာ ဘယ်လိုကြောင့် ဒီလောက်အထိ ဖြစ်သွားရတာပါလဲ။
“ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ပြည်သူလူထုကြီးဟာ စားဝတ်နေရေးဆင်းရဲမှု၊ အဖက်ဖက် အကျပ်အတည်းကြောင့် စိတ်တွေ မကျေမလည်ဖြစ်နေတာတွေ ဒါတွေက အခြေခံရှိနေပြီးသား။ မိတ္ထီလာမှာဖြစ်တာက မတော်တဆဖြစ်တာလို့ ထင်တယ်။ သို့သော် အဲလိုအခြေအနေမှာ တချို့သောအင်အားစုတွေက အစိုးရအပါအ၀င် တမင်ဖန်တီးလိုက်တာလည်း ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလောက်အကြီးကြီးဖြစ်သွားတာ။ ဒါကြောင့် မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပါစေ၊ မြန်မာပြည်သား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပါစေ တဖက်နဲ့တဖက် အာဃာတနဲ့ လုပ်စရာကို မရှိဘူးလို့ ထင်တယ်။ ဒါက ဖန်တီးပေးတာ။ အစိုးရက တမင်လုပ်တယ်လို့ ထင်တယ်။”
“ဘာလို့ တမင်လုပ်တာလဲဆိုတော့ မြန်မာတပြည်လုံးမှာ သူတို့အုပ်ချုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ သူတို့စစ်တပ် ကြီးကြီးမားမား တည်ရှိနေဖို့ လိုအပ်တယ်။ စစ်တပ်ကို အသွင်ပြောင်းထားတဲ့လူတွေပဲ အုပ်ချုပ်နေဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြဖို့ လိုပါတယ်။ နောက် မမေ့သင့်တာက အခုလို အဓိကရုဏ်းတွေ ဖန်တီးနေချိန်မှာပဲ လက်ပန်းတောင်းဘက်မှာ သူတို့လုပ်ငန်းတွေကို ပြည်သူလူထု သဘောမတူဘဲ ဖိလုပ်နေတယ်။ ဒါတွေကို ဖုံးထားဖို့ အာရုံပျက်အောင်၊ သူတို့ လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ရအောင် ဆက်အကောင်အထည်ဖော်နေတယ်။ မြေသိမ်းတာတွေ၊ အက်ဆစ်စက်ရုံ လည်ပတ်တာတွေ အတင်းလုပ်နေပါတယ်။ ဒါကိုလည်း ဘယ်ကော်မရှင်ကမှ မတားပါဘူး။ သိချင်ဟန်မပြုဘူး။ အဲလို အခြေအနေမျိုးပါ။”
“ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ရှေးအစဉ်အလာကရော၊ ပါတီစထောင်ကတည်းကရော လူထုကို အကြမ်းဖက်တဲ့နည်းနဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်အောင် ဘယ်တုန်းကမှလည်း အားမပေးခဲ့ဘူး။ မပါဝင်ခဲ့ဘူး။ အလားတူပဲ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးလက္ခဏာဆောင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း ဘယ်တုန်းကမှ အားမပေးခဲ့ဘူး၊ မပါခဲ့ဘူး။ နောင်မှာလည်း အဲလိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ တိတိလင်းလင်း ဒီနေရာက ပြောချင်တယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမည်ခံ စစ်ဗိုလ်ဟောင်းတွေက ပြောနေတာကိုလည်း ချေပနေမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့နဲ့လည်း ဖက်ပြိုင်ပြောနေမှာ မဟုတ်ဘူး။”
(၂၂)ကြိမ်မြောက် မြန်မာရိုးရာ တိုကျို အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ဧပြီလ(၇)ရက်နေ့ တိုကျိုမြို့ HIBIYA ပန်းခြံမှာ နံနက် ၁၀း၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(LDB) မှ တာဝန်ယူ ဦးစီး၍ စည်းကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အတာသင်္ကြန်ပွဲတော် ဖွင့်ပွဲအစီအစဉ်ကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှိုင်အေးမှ နံနက် ၁၀း၃၀ နာရီမှာ ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။
တိုကျိုအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်မှာ ရေက်ပက် ကစားခြင်းမျိုး မရှိသော်လည်း မြန်မာလူမျိုးများအတွက် သင်္ကြန်ယိမ်း အကအလှများ ခေတ်ပေါ်တေးဂီတ ဖျော်ဖြေမူ အစီအစဉ်များ အထူးအငြိမ့်အက နှင့်အတူ သင်္ကြန်သံချပ်အစီအစဉ်မှာ မင်္ဂလာဒိုး၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ် သံချပ်များကို တင်ဆက်ရာမှာ မြန်မာပြည်၏ အခြေအနေ ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ ဘ၀သရုပ်ဖေါ်တွေကို ထိထိမိမိ တင်ဆက် ဖျော်ဖြေသွားခဲ့ရာ ဂျပန်ရောက်ပရိတ်သတ်များ အထူးနှစ်ချိက်အားပေးမူကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ တိုကျိုသင်္ကြန်ရဲ ထူးခြားချက် ကတော့ မြန်မာပြည် အလွမ်းပြေသင်္ကြန်မုန့်လုံးရေပေါ် တိုင်းရင်းသား ရိုးရာအစားအစာများ မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအသောက် မျိုးစုံစုံလင်စွာနဲ့ အမှတ်တရ ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ခန်းများတို့ပါ တည်ခင်း ရောင်းချထားသည်ကို ထူးခြားစွာတွေ့ရပါသည်။
ဂျပန်နိူင်ငံမှာ မြန်မာလူမျိုးများ ဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပွဲတော်များအနက် အစည်းကားဆုံး ဖြစ်သည့်အပြင် တိုကျိုသင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် ဂျပန်နိူင်ငံရောက် ပြည်ထောင်စုဘွား မြန်မာ တိုင်းရင်းသားများအပြင် ဂျပန်လူမျိုးများ အပါအ၀င် ပျော်ပျော်ပါးပါး ပါဝင်ဆင်နွဲတာကိုတွေ့ ရပါသည်။
စင်္ကာပူမှာ မြန်မာအိမ်ဖေါ်တွေ ထွက်ပြေးနှုန်း မြင့်တက်လာ
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ အိမ်ဖော်အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာ မိန်းကလေးတွေဟာ ကာလကြာရှည် လုပ်ခလစာ မရတာကြောင့် အလုပ်က ထွက်ပြေး
သူတွေ များပြားလာနေတယ်လို့ စင်္ကာပူ The Straits Times သတင်းက ဒီကနေ့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်ဝါရီလ ကတည်းက အိမ်ရှင်တွေဆီကနေ ထွက်ပြေးခဲ့သူ မြန်မာအိမ်ဖော်အမျိုးသမီး (၃၂) ဦး ရှိနေ ကြောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် တစ်နှစ်လုံးမှာ ထွက်ပြေးသူ (၆၄) ယောက်ရှိခဲ့တာကြောင့် ဒီနှစ်မှာ ထွက်ပြေးသူ အရေ အတွက် ပိုများလာဖွယ်ရှိကြောင်း သတင်းက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာအိမ်ဖော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ တစ်လလုပ်ခ လစာဟာ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ (၄၀၀ - ၄၂၀) အထိသာ ရကြပြီး အလုပ် ရှာဖွေပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီကို ပြန်ဆပ်ဖို့
က စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ (၃၂၀၀) ကနေ (၃၃၆၀) အထိ ရှိတာကြောင့် တစ်လ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ (၁၀-၂၀) လောက်သာရကြကြောင်း၊ တချို့ဆိုရင် (၈) လလောက်အထိ လစာမရဘဲ၊ အကြွေးအကျေ ဆပ်ပြီးမှသာ လစာရကြတယ်လို့ သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရက အမျိုးသမီးတွေ ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ အိမ်ဖော်အဖြစ်လုပ်ကိုင်တာတွေ၊ ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ လုပ်ကိုင်တာတွေကို တားမြစ်
ထားပေမဲ့၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံကို အိမ်ဖော်အဖြစ် သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူတွေ တနှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပြီး များလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အိမ်ဖော်အလုပ်ရှာဖွေပေးသူတစ်ဦးရဲ့ ပြောဆိုချက်အရ စင်္ကာပူမှာ အိမ်ဖော်အဖြစ် လာရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့ မြန်မာ အမျိုးသမီး အရေအတွက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က နှစ်သောင်းလောက်သာ ရှိပေမဲ့၊ ဒီနှစ် ပထမလေးလ အတွင်း ၂၇,၀၀၀ နီးပါးအထိ ရှိနေပြီလို့ သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာ့ နယ်စပ်လုံခြုံရေးကို ဘင်္ဂလားဒေရှ့် အခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်းတွေ ခြိမ်းခြောက်
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နယ်စပ်မှာ တည်ငြိမ်မှု မရှိအောင် ဘင်္ဂလားဒေရှ့် အခြေစိုက် ရိုဟင်ဂျာ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေက ခြိမ်းခြောက်နေတယ်လို့ မောင်တောခရိုင် အခြေစိုက် နယ်စပ်ဒေသ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲ ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်နိုင်ဦးက RFA ကို ဒီကနေ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီလိုမျိုး ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို Rohingya Solidarity Organization(RSO)၊ Arakan Rohingya National Organization(ARNO) တို့လို အဖွဲ့အစည်းတွေက လုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်ပြီး၊ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ အဲဒီလို အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ သတ်ဖြတ်မှုကိုခံရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးရှိပြီး၊ နှစ်ဦးကတော့
ယခုအချိန်ထိ ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာက ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အစည်းတွေ စွပ်စွဲသလို နစကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီးတွေကို အတင်းအဓမ္မ ပြုကျင့်တာတွေ မရှိကြောင်း နစက တပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲက အခုလို ငြင်းဆိုပါတယ်။
“ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက တိုင်ကြားလို့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ခုံရုံးဖွဲ့ပြီး၊ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက တစ်ချို့ ရာဇဝတ်မှုတွေမှာ တရားခံ
ဖမ်းဆီးရေးကို ရွာတွေမှာ ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားတယ်၊ ကင်းပုန်းဝပ်တယ်၊ စောင့်ဆိုင်းတယ်၊ လျှက်တပြက်
ရှာဖွေတယ်၊ အဲဒါတွေကို ရပ်တန့်သွားစေချင်လို့ သူတို့ဘက်က ဒီလိုတုံ့ပြန်တာတွေ ဝါဒဖြန့်တာတွေ တွေ့ရပါတယ်။”
ရိုဟင်ဂျာ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နယ်မြေအတွင်းမှာ အခြေစိုက် လှုပ်ရှားတာတွေရှိတယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နဲ့မြန်မာ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ နှစ်ခုကြား ပြုလုပ်တဲ့ အလံတင်အစည်းအဝေးတွေမှာ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် အာဏာပိုင်တွေက ဝန်ခံ ပြောကြားတာတွေ ရှိပါတယ်။
မြန်မာ့တရားစီရင်ရေး စနစ်ကို ပြည်သူ ၉၉ရာခိုင်နှုန်းက အယုံအကြည် မရှိကြောင်း အမေစု ပြော
အရှင်ဝီရသူု ( ငရဲမှ အပြန် )
နယ်သာလန်မှ ကျောင်းထိုင် အရှင်ဇဝန ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အများသှူုငှာ ကြည့်ရှု့ ရန် ။
Permit public from AShin Zawana who live in The Netherlands
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းဖြစ်သူ ဦးဝင်းတင်အား လွတ်မြောက်ပြီး ၅ နှစ်ကြာမှ အင်းစိန် ရဲစခန်းက ထောင်ဝတ်စုံပြန်အပ်ရန် တရားဝင် အကြောင်းကြား
on Monday, 08 April 2013 11:09
သတင်းစာဆရာ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းတင်အား၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ထောင်မှလွတ်မြောက်စဉ်က ၀တ်ဆင်လာခဲ့သော ထောင်ပုံစံ ၀တ်စုံအား ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီ ၄ ရက်နေ့က အင်းစိန် ရဲစခန်းမှ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် တရားဝင် တောင်းခံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"ကျွန်တော်ကတော့ ပြောလိုက်တယ်၊ မအပ်နိုင်ဘူး၊ တရားစွဲရင်လည်း တရားရင်ဆိုင်မယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်၊ နောက်ဆုံးရဲမှူးက ပြန်မအပ်ရင် နှစ်ထောင်လျော်လို့ ပြောတယ်၊ နှစ်ထောင်လည်း မလျော်နိုင်ဘူးလို့ ပြန်ပြောတော့ သူတို့နှစ်ထောင်စိုက်မယ်၊ လျော်လိုက်တဲ့အကြောင်း လက်မှတ်ထိုးပေးပါလို့ ပြောတယ်၊ ကျွန်တော်ကတော့ လက်မှတ်လည်း မထိုးနိုင်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ်" ဟု ဦးဝင်းတင်က ပြောပါသည်။
ဦးဝင်းတင်သည် ထောင်မှ လွတ်မြောက်လာစဉ် ကတည်းက ထောင်ပုံစံ ၀တ်စုံအား အမြဲဝတ်ဆင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ "ကျွန်တော့်ကို ၂၀၀၅၊ ဇူလိုင် ၆ ရက်နေ့က ညွန်မှူးဦးဇော်ဝင်းကိုယ်တိုင် လူတွေအများကြီးရှေ့မှာ လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုပြီး ပြောခဲ့တယ်၊ တကယ် မလွှတ်ပေးဘဲ ထောင်ထဲကို ပြန်ထည့်တယ်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ရောက်တော့ ကျွန်တော့်ကို လွတ်ပြီဆိုပြီး လာခေါ်ပြန်တယ်၊ ကျွန်တော်ကတော့ မယုံဘူး၊ ဒါကြောင့် ပုံစံနဲ့ပဲ ထွက်လာတယ်။ ကျွန်တော့ကိုယ်ကျွန်တော် လွတ်ပြီလို့ မယုံကြည်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ရဲဘော်တွေ ထောင်ထဲမှာ ကျန်နေသေးတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေလည်း၊ ထောင်မကျပေမဲ့ ထောင်ကျနေသလို ဖြစ်နေသေးသ၍ ကျွန်တော်က ထောင်ကလွတ်ပြီလို့ မယူဆပါဘူး" ဟု ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် စုစုပေါင်း နှစ် ၂၀ ကျော် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရပြီး အင်းစိန်ထောင်တွင် ၁၉ နှစ်ကျော် နေထိုင်ခဲ့ရကာ ၂၀၀၈ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့က ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားရှိ မြန်မာသံရုံးမှ ၀န်ထမ်းတစ်ဦး အနိုင်ကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရသည် ဆိုသည့်သတင်း မဟုတ်မှန်
on Monday, 08 April 2013 09:50
အင်ဒိုနီးရှားရှိ မြန်မာသံရုံးမှ ၀န်ထမ်းတစ်ဦး အနိုင်ကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရသည်ဆိုသည့် သတင်းအပါအ၀င် Facebook လူမှုကွန်ရက်များတွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် ကောလာဟလ သတင်းများ မမှန်ကန်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ဧပြီလ ၇ ရက်က ၎င်း၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။
ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က အချက်သုံးချက်အား ဖြေကြားထားရာ "ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ ကော့သောင်းဒေသတွင် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် တပ်မတော်သားများ ကျဆုံးသည်ဟူသည့် သတင်းမှန်ကန်မှု မရှိကြောင်းနှင့် အင်ဒိုနီးရှားရှိ မြန်မာသံရုံးမှ ၀န်ထမ်းတစ်ဦး အနိုင်ကျင့်ခံရပြီး အသတ်ခံရသည်ဆိုသည့် သတင်းမှန်ကန်မှု မရှိပါ" ဟု ရေးသားထားပါသည်။
၎င်းက ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ခရီးသွားလာမှုများ များပြားနေသောကြောင့် အီးမေးလ်ဖြင့် မေးမြန်းလာသည့် မေးခွန်းများအား ပြန်လည်ဖြေဆိုနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့သည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ Facebook စာမျက်နှာမှ ရေးသားဖော်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ သာမက အခြားအစ္စလာမ် နိုင်ငံများတွင်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ လုံခြုံရေးအတွက် မြန်မာသံရုံးများက သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ အစိုးရများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
မိတ္ထီလာ ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ် လူ ၄၀ ကျော်အား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိ
မိတ္ထီလာ ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ရလဒ်အရ ပြည်တွင်း အဖွဲ့အစည်းမှ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဟု ယူဆပြီး လူ ၄၀ ကျော်အား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိ
on Monday, 08 April 2013 10:37
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်အား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ရလဒ်မှာ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြထားကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး နယ်စပ်ရေးရာနှင့် လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကျော်မိုးမှ ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့က Eleven Media သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
နှစ်ပတ်ကျော်ကြာ စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်အရ ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုမှ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဟု ယူဆရပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ ၎င်းအဖွဲ့အစည်း၏ ကွင်းဆက်ဟု ယူဆရသူ ၄၀ ကျော်အား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပြီး ကွင်းဆက်များ ရှိနိုင်သဖြင့် စုံစမ်းလျက်ရှိကြောင်း ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကျော်မိုးက အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
မိတ္ထီလာမြို့ ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်အား ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းအား တရားဝင်ထုတ်ပြန်ရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ လိုအပ်နေသေးကြောင်း၊ ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကျော်မိုးထံမှ သိရသည်။ "ဖြစ်စဉ်မှာ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ လူတွေနဲ့ ကွင်းဆက်တွေကို ဆက်လက်စုံစမ်း ဖမ်းဆီးမှုတွေ ပြုလုပ်သွားပါမယ်။ ဥပဒေပိုင်းအရတော့ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု အဖွဲ့ကနေပြီး စီရင်ချက် ချသွားမှာပါ" ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကျော်မိုးက ပြောသည်။
မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က မိတ္ထီလာဈေးကြီးရှိ နယူးဝိန့်စိန် ရွှေဆိုင်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သာမန်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုမှ စတင်ကာ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းအသွင် ဖန်တီးလုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် သက်ဆိုင်ရာမှ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထိန်းသိမ်းခဲ့ရာတွင် အခြေအနေမှာ ပိုမိုဆိုးရွားမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက် မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင်မူ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာကာ တပ်အင်အား အသုံးပြု ထိန်းသိမ်းခဲ့ရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်မှာ သုံးရက်ကြာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ ၄၃ ဦးနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ ၅၀ ဦးထက်မနည်း ရှိခဲ့ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်အတွင်း မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရသော အိမ်အလုံးရေ ၁၆၀၀ နီးပါးနှင့် ဘာသာရေး အဆောက်အဦများလည်း ပျက်စီးခဲ့ပြီး ဒုက္ခသည်ဦးရေ ၁၀၀၀၀ ခန့် ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဘာသာလေးခုကို ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းထဲ ထည့်သင်ရေးအတွက် စိတ်ထဲမှာတွေးမိတာက ဘယ်လို သင်မလဲ ဆိုတာကိုပါပဲ။
ဘာတွေသင်မှာလဲ..မောရှေတို့နဲ့ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုဓမ္မပုံပြင်တွေလား၊ ဗုဒ္ဓဘာသာထဲက အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုပုံပြင်တွေနဲ့လား၊
အစ္စလာမ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မိုဟာမက်ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းတွေပါနေမလား ဒါ့အပြင် သီဝတို့ ဗိဿနိုးတို့နဲ့ ထူးခြားဆန်းပြားလှတဲ့
အဲ့ဒီမှာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ "The right to refuse any religion"ဆိုတဲ့ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတစ်ခုကို
သတိရမိလေတယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ Social Harmony ရှာပုံတော်ခရီးမှာ Immigrants တွေနဲ့ Local Community တွေက
သူတို့မိခင်ဘာသာစကားကို သုံးစွဲဖို့ အားပေးခြင်းနဲ့ ပြဿနာမတက်အောင်ထိန်းတာကို သတိထားမိတယ်။
စင်ကာပူရဲ့ One Nation Policy မှာ ဘာသာရေးကို ဥပဒေနဲ့ကာထားပြီး နိုင်ငံရေးမှာဝင်စွက်မလာအောင် ချုပ်ထားတာကို
သတိရမိနေပါတယ်။ သူတို့တွေ အလုပ်ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဘာသာလေးခုကို ကျောင်းသင်ခန်းစာထဲထည့်သင်မယ်ဆ်ိုတာကိုတော့ စိတ်ထဲရီချင်နေမိပါတယ်။ အဲ့ဒီအစား အလင်းဆိုတာ ဖိုတွန်စွမ်းအင်ထုပ်တွေအကြောင်းဆိုတဲ့ သင်ရိုးတွေ၊ နောက်နူကလိယ Fusion & Fission ဆိုတဲ့ သဘောတရားတွေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးညစ်ညမ်းလာမှုတွေ၊ ခေတ်သစ် ဘောဂဗေဒတွေ စတဲ့ သင်ရိုးတွေကို ပြုပြင်ဖို့အရင်မစတင်သေးဘဲ ဒီလို အလုပ်မျိုးလုပ်လာတာက ကောင်းကားကောင်း၏၊ မထိရောက် ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ မြင်နေမိပါတယ်။
ဒီလိုဘာသာရေးအရ မျှခြေတစ်ခုရှာဖို့ထက် လူတွေပိုပြီး ရင့်ကျက်လာအောင် Mass Media ကိုအားထားတာ၊
ပညာရေးရေချိန်မြှင့်တင်တာက ပိုပြီးလက်တွေ့ကျကြောင်း ခပ်ပြတ်ပြတ်ပဲ မြင်ပါတယ်။
Secularization မလုပ်ဘဲ Theocratic state တွေလုပ်နေရင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးတွေတိုးချဲ့တဲ့ နေရာမှာ
အများကြီး ပြဿနာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
The Silent Killer (အသံတိတ် လူသတ်သမား)
အသံတိတ် လူသတ်သမား (သတင်းဆောင်းပါး ၉း၅၁)
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းအမြင့်ဆုံး ၁၀ နိုင်ငံထဲမှာ ဒုတိယမြောက်ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာထဲမှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၉၆၉စတေကာဝေတဲ့လူငယ်တွေကို အုပ်စုဖွဲ့ဓားနဲ့ထိုးတဲ့ သ...
တန့်ယန်း စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအားလုံး အောင်မင်္ဂလာကျောင...
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဟာ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးကို မှန်...
မြန်မာ့ နယ်စပ်လုံခြုံရေးကို ဘင်္ဂလားဒေရှ့် အခြေစိုက်...
မြန်မာ့တရားစီရင်ရေး စနစ်ကို ပြည်သူ ၉၉ရာခိုင်နှုန်းက...
အင်ဒိုနီးရှားရှိ မြန်မာသံရုံးမှ ၀န်ထမ်းတစ်ဦး အနို...
မိတ္ထီလာ ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ် လူ ၄၀ ကျော်အား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး...